La Trobe University - Dzidza mhiri kwemakungwa muna Australia
Musakanganwa kuti kurukura La Trobe University
Kunyoresa pana La Trobe University
La Trobe University ndiyo wokuAustralia multi-kembasi paruzhinji tsvakurudzo yunivhesiti ane flagship kembasi, chikuru inopfuura nevakawanda pazvivako munyika, riri mu Bundoora, Victoria.
Yunivhesiti yakatangwa 1964 vachitevera Kubvumirana ari La Trobe University Act nokuda Victorian Parliament pamusoro 9 December gore iroro, achiva yunivhesiti wechitatu rehurumende uye rechigumi yunivhesiti iri Australia. Nepo asingadi kugoverana purani aesthetics vayo sandstone vezera, STIs Musimboti pa La Trobe, sezvavanogona Monash, aiva “pakati wokupedzisira yekare mumayunivhesiti mune Australia”. Pakati zvido zvakawanda La Trobe kubudikidza havaoni ayo, imwe yayo dzepamusorosoro kubudirira, uye tsime guru kuzvikudza wepayunivhesiti, kwave refu-ukama hwayo kuzvipira pakupa kuwana dzidzo yepamusorosoro kune avo rakagara richidudzirwa risingabatanidzwi zvekutepfenyura. mu 2015 zvakanzi yandaipuwa pamusoro 100 kuyunivhesiti pasi 50 mu Times yepamusoro World University Rankings. Mukuwedzera, ari 2015-16 THE kuita zviratidzo akaisa La Trobe sezvo rechi12 muAustralia pakudzidzisa, 11fung kutsvakurudza, uye rechi13 nokuti indasitiri mari.
La Trobe kuti kembasi yepakutanga uye huru iri mune Melbourne mumaguta nharaunda, mukati weChicago Bundoora. Rine zvimwe pazvikoro riri romunharaunda Victorian guta Bendigo maviri makuru uye mapatya maguta kumuganhu Albury-Wodonga. Yunivhesiti ine mbiri duku Regional pazvikoro muna Mildura uye Shepparton uye nhatu zviduku CBD pazvikoro: mbiri Melbourne musi Franklin Street uye Collins Street uye mumwe York Street muSydney.
La Trobe rinopa Rokutenderwa uye dhigirii makosi mhiri dzayo mbiri mumakoreji of Arts, Social Science uye Commerce (ASSC) uye Science, Health uye Engineering (SHE). ASSC une pazvikoro mana Business, dzidzo, Humanities uye Social Sciences, uye Mutemo, apo SHE inoumbwa vapfumbamwe zvikoro omubatanidzwa Health, Zvakarurama Systems Biology, Cancer Medicine, Engineering uye akarongeka Sciences, Life Sciences, Molecular Sciences, Ukoti uye kusununguka, Psychology uye Public Health uye Rural Health.
La Trobe runoonekwa kuva simba kunyanya munzvimbo hwemashiripiti uye nevanhu; ichi kwakaratidzwa 2014 QS World University Rankings pakange yandaipuwa pamusoro 200 dzakawanda mumayunivhesiti nokuti unyanzvi uye nevanhu. Rakanga yandaipuwa yechi38 munyika muminda zvokuchera matongo, kare uye Classics, apo wemagariro evanhu, kutaurirana, vezvenhau zvidzidzo uye zvemutauro zvose scored pamusoro 100. Zvakanzi zvekare rakava pamusoro 100 mumayunivhesiti nokuti unyanzvi uye nevanhu vari 2014-15 Times yepamusoro World University Rankings, apo waiva nhamba imwe Australian payunivhesiti indasitiri mari. La Trobe zvakare ine Masters akasimba Business Administration (dance) chirongwa iyo rave yandaipuwa pamusoro 200 mabhizimisi zvikoro kubudikidza QS Global Rankings kubva 2010. mu 2014 ari La Trobe dance akanga yandaipuwa rechi14 muAsia, 4fung muAustralia uye 2nd muna Victoria kubudikidza QS Global Rankings.
Tichitevera tsvakurudzo yepamusoro, yunivhesiti Exhibits simba pazvinhu ounyanzvi uye nevanhu, sayenzi zvoutachiona uye biotechnical. mu 2015 La Trobe akanga yandaipuwa 3rd muna Victoria muna Australian Research Council kuti Excellence muna Research nokuda Australia (MUNGUVA) ripoti.
La Trobe ari yakasvibirira yunivhesiti uye nhengo Innovative Research Africa.
Nokuti vakawanda nhoroondo yacho La Trobe rave aionekwa inoita kukuru uye mberi pfungwa mukati Australia, zvikuru zvinobva simba mudzidzi kwekuratidzira payunivhesiti panguva Kuma1960 uye kwema1970. Nepo kwete kwakawanda sezvo zvakanga muzana remakore rechi20, ndiwo mukurumbira kuti richiri inoitwa.
Kadambari uye Engineering
Health Sciences uye Work Social
mutambo, Tourism uye Hospitality
Mutemo uye Legal Studies
Outdoor uye Environmental Education
Counseling uye Psychotherapy
Sciences uye Psychology
Art uye Design
Arts, kutaurirana, Humanities, Social Sciences
La Trobe kwave rimwe rokuAustralia kupayona mumayunivhesiti kwemakore anopfuura makumi mana nemashanu. Discover nhoroondo yedu nedzimwe, kusanganisira Mashoko edu uye maoko maoko.
vachipemberera pamusoro 40 Makore enhau
mu 1967, 552 vadzidzi vakanyoresa pana La Trobe University, University wechitatu kuvhura muna Victoria.
Yakura kutakura kupfuura 30,000 vadzidzi kusanganisira anenge 7,600 vadzidzi vokune pamusoro 90 nyika.
zvino tine richikurukura pazvikoro pamwe 21,000 vadzidzi vedu Melbourne kembasi uye pamusoro 5,900 panguva pazvikoro wedu Albury-Wodonga, Bendigo, Mildura, Melbourne City uye Shepparton.
Past Chancellors uye Vice-Chancellors
kuzvipira La Trobe University kuti dzidziso dzakanaka kwave kutungamirira nedzimwe kurudziro zvechokwadi vanhu. Vatungamiri kuti kuumbwa yunivhesiti, uye upenyu nezviuru vadzidzi kuti vakapinda La Trobe mumakore mana emakore.
Aimbova Professor Nancy F Millis AC: 1992-2006 Brian Stoddart: 2006
La Trobe University ainzi pashure Charles Joseph La Trobe, ari Superintendent rokutanga Port Phillip District kubva 1839 kuti 1850 uye vokutanga refutenendi-Gavhuna itsva muhutongi Victoria kubva 1851 kuti 1854. Akanga ari murume rinosundwa vanoda yake mutsauko nharaunda akashanda, kusiya nhaka kuti mberi nhasi pana La Trobe University.
Sir Charles La Trobe akaita zvakawanda kuti kuumba rokuAustralia State of Victoria kupfuura mamwe murume. Kubva rudo rwake pakati Australian kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza ayo, urongwa hwake chinzvimbo zvokuchinja muhutongi Victoria, kuti aiva nehanya nokugara zvakanaka wokutanga vokuAustralia, akanga ari murume zvikuru rinosundwa mberi pasocial tsika.
tsika dzake dzainzwika La Trobe University kuti pakuvambwa basa kushumira munharaunda kuburikidza tivandudze kuwana dzidzo yepamusorosoro, uye itsika kuti mberi nhasi aine zvakawanda zvirongwa uye vakaedza kuwedzera dzidzo yepamusoro vapindure prices pakati Victoria’ vaitambura nharaunda.
Unoda kurukura La Trobe University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
La Trobe University iri Map
Photos: La Trobe University pamutemo Facebook
La Trobe University wongororo
Join kukurukura pamusoro La Trobe University.